Man United oo go’aamisay mustaqbalka Chris Smalling, kaddib codsi kaga yimid mid ka mid ah kooxaha Premier League – Gool FM
Man United oo go’aamisay mustaqbalka Chris Smalling, kaddib codsi kaga yimid mid ka mid ah kooxaha Premier League
Dajiye August 7, 2019
(Manchester) 07 Agoosto 2019. Manchester United ayaa go’aamisay mowqifkeeda kaga aadan in Chris Smalling ay ka iibiso kooxda Everton, kahor inta uusan xirmin suuqan xagaaga ee dhanka England.
Shabakada “Sky Sport” ee dalka England ayaa sheegtay manta oo Arbaco ah in saraakiisha Red Devils ay iska diideen dalab kaga yimid kooxda Everton ee ku aadanaa inay ka helaan adeega Chris Smalling kahor inta uusan xirmin suuqan xagaaga.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in tababare Ole Gunnar Solskjær uu diiday inuu ka maarmo adeega Chris Smalling, maadaama uu u arko inuu ka mid yahay xiddigaha ugu muhiimsan ee dhanka daafaca uu ku heysto garoonka Old Trafford iyadoo sidoo kale ay wehliyaan Harry Maguire iyo Victor Lindelöf.
29 jirka ayaa cusbooneysiiyay qandaraaskiisa kooxda Manchester United bishii Diseembar ee la soo dhaafay kaasoo gaaraya illaa iyo Juun 2022, iyadoo ay macquul tahay in loo kordhiyo sanad kale.
Chris Smalling ayaa ciyaaray 24 kulan oo horyaalka Premier League ah xilli ciyaareedkii hore, wuxuuna guud ahaan ciyaaray 323 kulan ee ah tartamada oo dhan tan iyo markii uu yimid Man United 2010-kii.
Klopp oo cadeeyay kooxaha ugu cadcad ee ku guuleysan kara Premier League xilli ciyaareedka cusub
Pique oo ka aragti dhiibtay hadaladii uu Messi ka sheegay kulankii Arsenal ee koobka Joan Gamper Trophy